नेकपा कै मेयर र उपमेयर बिच किन भयो हात हालाहाल ? (भिडियो हेर्नुहोस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > नेकपा कै मेयर र उपमेयर बिच किन भयो हात हालाहाल ? (भिडियो हेर्नुहोस्)
admin October 17, 2020 October 17, 2020 भिडियो, समाचार	0
कार्तिक, काठमाडाैँ । कैलाली जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा विवाद भएको छ । भवन उद्घाटनमा उक्त नगरपालिकाकी उपमेयर प्रेम कुमारी थापाको नाम शिलालेखमा नदेखिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । थापाले अाफ्नो नाम नदेखेपछि शिलालेखमा ढुंगा प्रहार समेत गरेकी छिन् । उक्त भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा देखिएको उक्त भिडियोमा उपमेयर थापाले शिलालेखप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ढुंगा बजारेकी छिन् । उनलाई नगरपालिका मेयर ममता प्रसाद चाैधरीले मर्यादाको ख्याल गर्न भन्दै रोक्न खोज्छन् । तर, थापा भने उफ्रीउफ्री ढुंगा बजार्छिन् ।
यस विषयमा थप जानकारी लिने हेतुले सो नगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरलार्इ फोन गर्दा सम्पर्क हुन सकेन । मेयर चाैधरीको मोबाइल अफ हुँदा उपमेयर थापाको फोन उठ्न सकेन ।
घोडाघोडी नगरपालिका मेयर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गुटका हुन् भने उपमेयर प्रेम कुमारी थापा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल गुटकी हुन् । विवादका बीच पनि भवन उद्घाटन भने सम्पन्न भएको सुचना अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
नायिका सना खानले छाडिन् बलिउड
बिदेशमा बिरामी हुँदा कतिसम्म दुःख र पिडा हुन्छ? सबैकाे मन रूने भिडियो अवस्य हेर्नुहाेस्